Tesalonikafo II 3 NA-TWI - Mommɔ mpae mma yɛn - Anuanom, asɛm a - Bible Gateway
Tesalonikafo II 2Timoteo I 1
Tesalonikafo II 3 Nkwa Asem (NA-TWI)
3 Anuanom, asɛm a etwa to ne sɛ, mommɔ mpae mma yɛn sɛnea ɛbɛyɛ a Awurade asɛm bɛkɔ so atrɛw ntɛm sɛnea ɛyɛe wɔ mo mu no. 2 Afei mommɔ mpae mma yɛn sɛnea ɛbɛyɛ a Onyankopɔn beyi yɛn afi abɔnefo ne nsɛmmɔnedifo nsam. Efisɛ, ɛnyɛ nnipa nyinaa na wogye asɛm no di. 3 Nanso Awurade yɛ ɔnokwafo. Ɔbɛhyɛ mo den na wagye mo afi ɔbɔnefo no nsam. 4 Awurade mma yɛn mo mu anidaso. Yɛwɔ anidaso sɛ moreyɛ na mobɛkɔ so ayɛ biribiara a yɛbɛkyerɛ mo sɛ monyɛ no.